Shirkii Guurtida Waxgaradka Iyo Hogaaminta Sare Ee XDSHSI Oo Maalintii Labaad Kasocda Xarunta Jigjiga - Cakaara News
Shirkii Guurtida Waxgaradka Iyo Hogaaminta Sare Ee XDSHSI Oo Maalintii Labaad Kasocda Xarunta Jigjiga
Jigjiga(CN) Khamiis. Jan.22.2015, shirka guurtida wax-garadka iyo hogaaminta xukuumada oo maalintii shalay kabilaabmay xarunta Jigjiga ayaa maanta labadii galinba kasocda hoolka shirarka ee Qaryaan Dhoodaan. Shirkan ayaa laga wadatashanayaa arimo dhowr ah oo uu XDSHSI kala tashanayo hogaamin dhaqameedka, wax-garadka iyo salaadiinta deegaanka oo ka kalatimid qaybaha kala duwan ee deegaanka.
Arrimaha ay kawada tashanayaan hogaaminta xisbiga iyo hogaamin dhaqameedka iyo wax-garadka deegaanka ayaa waxaa kamid ah nabadgaliyada iyo ladagaalanka argagixisada, arimaha doorashooyinka iyo go'aanka ku aadan dumarka, wax-qabadka, iyo qorshaha shanta sano ee markii labaad bilaaban doona kaasoo ah qorshaha kobaca dhaqaalaha iyo isbadalka shanta sano (GTP-2).
Siduu kusoo waramayo wariyaha CakaaraNews ee hada kusugan madasha shirku kasoco ee Qaryaan hoodaan waxaa maanta galinkii hore ilaa hada aad looga hadlayaa arinta nabadgaliyada iyo ladagaalanka argagixisada iyadoo shalayto gurigu meel isla saaray go'aanka cad ee taageeraya in dumarka laga qayb galiyo doorashada baarlamanka in kabadan ilaa 30%.
Hogaaminta sare ee XDSHSI oo ay ugu horeeyaan madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Labada madaxwayne kuxigeen ee kala ah mudane Mowliid Haayir iyo mudane Cabdixakiim Cali Cigaal iyo masuuliyiin kale ayaa si fahan buuxa leh usoo bandhigay xaaladaha nabadgaliyo iyagoo ay masuuliyiinta xisbigu toosh ku ifiyeen khatarta iyo saamaynta argagixisada iyo xagjirnimada ee caalamka iyo bariga Afrika.
Mar uu madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar saaka kahadlayay arintan ayuu sheegay in ay xagjirnimada iyo argagixisadu ay gabaad kadhigtaan iyagoo diinta islaamka qadfaya islamarkaana kusoo dhex-gala manhaj iyo duruusta hoose, taasoo ka khatar badan dagaalka caadiga ah ee ay argagixisadu caalamka ku ahayso.
Golaha guurtida iyo wax-garadka ayaa iyaguna dhankooda soo jeedinaya dhibaatooynka iyo saamaynta ay argagixisadu leedahay ayaa waxay waxgaradku aad uga hadalayeen sidii loo ilaalin lahaa mujtamaca guud ee Ehlu-Sunna Wal-Jameeca iyo wanaaga diinta islaamka islamarkaana gacan bir ah la isooga qaban lahaa isku day kasta oo laxidhiidha argagixisada iyo xag-jirnimada oo ah cadawga binu-aadamka.
Wariyaha CakaaraNews ayaa wali kusugan shirka isagoo sheegaya in wali aad looga hadlayo arinka ladagaalanka argagixisa iyo xag-jirnimada waxaana lafilaaa inuu shirkuu ilaa makhribnimada uu sii socdo.
Go'aamada iyo faahfaahinta kala soco CakaaraNews oo goob joog ku ah madasha shirarka ee Qayraan Dhoodaan ee uu kasocdo shirka wadatashiga ah ee xukuumada iyo wax-garadka deegaanka oo sii soconaya taniyo maalinta bari ah. Waxaana lafilayaa in barito laga hadlo arimaha waxqabadaka iyo qorshayaasa isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha ee shanta sano.